အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မမျှဝင်သင့်သော ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ(၂) | မြတ်နိုင်
မြတ်နိုင်	လူသားတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် မှတ်တမ်းလေးတစ်ခု	အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မမျှဝင်သင့်သော ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ(၂)
တကယ်တော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပဲ ရင်းနှီးခင်မင်တွေ့ဆုံရသူတွေဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရသူတွေလို့ သတ်မှတ် လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ ရှောင်သင့်တဲ့အချက် ၁ဝ ချက် ကို တင်ပြရာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အချက်ငါးချက်ကို တင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ် မှာတော့ ကျန်တဲ့ငါးချက် ကို ဆက်လက်လေ့လာတွေးဆ ဆင်ခြင်လိုက်ရအောင်နော်။
၅။ မိမိလိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်
အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်များ အသုံးပြုရာ၌ အထူးသတိပြုသင့်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နံပါတ်တစ်အချက် ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ လိပ်စာနှင့် ဖုန်း နံပါတ်ကို လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုခုပေါ်တွင် လူအများကို ပေးသိထားမိသည်ဆိုပါက မမြင်နိုင်သော အန္တရာယ်ကို လက်ယပ်ခေါ်ထားမိသလိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကံတရားဆိုသည်ကလည်း မည်သို့မျှမှန်းဆ ထား၍မရသည့် အရာ ဖြစ်သည့်အလျှောက် အကယ်၍ မိမိကသာ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကို အလွယ်တကူပေးထားမိပါလျှင် အန္တရာယ်ပြုနိုင်သူများကို မိမိထံတန်းမတ်စွာရောက်လာနိုင်စေမည့် သတင်း အချက်အလက်များကို မိမိကိုယ်တိုင် ပေးထား လိုက်မိသည့်အလားဖြစ် လာနိုင်ပါသည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်များပေါ်မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိသော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များမှ တစ်ဆင့် ဖြစ်ပွားပေါ် ပေါက်ခဲ့သော ဖောက်ထွင်းမှုများ၊ ပြန်ပေးဆွဲမှုများ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများ စသည်ဖြင့် မကြာခဏတွေ့ရတတ် သဖြင့် လူမှုကွန် ရက်များပေါ်တွင် မလိုအပ်ဘဲ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ် များကို ပေးသိ ထားခြင်းမျိုးကို လုံးဝ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ လိုအပ်၍ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုခုကို တစ်စုံတစ်ယောက်အား ပေး ရမည် ဆိုပါကလည်း ယခင်နည်းအတိုင်း မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းနှင့် အီးမေးလ် အသုံးပြုခြင်းတို့ကိုသာ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
၄။ မိမိ၏ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေ
မိမိ၏ဘဏ်အပ်ငွေများအကြောင်း၊ စတော့ရှယ်ယာများအကြောင်းစသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သူမျှ လူမှု ကွန်ရက် ပေါ်တွင် အသိပေးကြလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါ လိမ့်မည်။ သို့သော် အချို့သောလူအမျိုးအစား များအနေဖြင့်မူ ယင်းသို့သော ကိစ္စများကို တစ်ဦးတည်းသိဖွယ် သို့မဟုတ် မိသားစုကိစ္စဟု မမှတ်ယူကြဘဲ တစ်ကမ္ဘာလုံး အား အသိပေးထားတတ်ကြသည်။ မိမိ၏ ဘဏ်စာရင်းများအကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာများ အကြောင်း၊ လုပ်ငန်းကိစ္စနှင့် ဆိုင်သော ငွေကြေးအခြေအနေများအကြောင်း အားလုံး သို့မဟုတ် တချို့တစ်ဝက် ကိုမသိမသာ၊ တချို့ကသိသိသာသာ ပင် လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင် ဖော်ပြ ထားမိတတ်ကြသည်။ ယင်းသည် လည်းမှန်းဆ၍ မရသောအန္တရာယ် တစ်မျိုးမျိုးကို ဖိတ်ခေါ်မိသလိုဖြစ် တတ်ပါသည်။ မိမိ၏ ဘဏ်စာရင်း အကြောင်းမှ အစပြု၍ အချို့ငွေကြေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို မိမိ၏ နေ့စဉ် တင်လိုက်သော Status များတွင် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ်ပါကလည်း မိတ်ဆွေများ၏ Status များတွင် မသိလိုက်မသိ ဘာသာရေးလိုက်မိသော Comment များတွင်လည်းကောင်း သတင်းစပေးလိုက်မိသလိုဖြစ်တတ် သေး သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အွန်လိုင်း လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင် နေထိုင်ချိန်တွင် မိမိ၏သတိကိုလည်း လက်ကိုင် အမြဲပြုထား သင့်ကြောင်း အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ရရှိသွားသောသတင်းအချက် အလက်များကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုများက သတိပေးလျက်ရှိ နေပါသည်။ ဘဏ်စာရင်း၊ ခရက်ဒစ်ကတ်၊ စတော့ရှယ်ယာ စသည့်ငွေ ကြေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက် အအုံများ ပိုမိုထွန်းကားသောနိုင်ငံများတွင် ယင်းဖြစ်ရပ်မျိုးများအဖြစ်များတတ် ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အင်တာ နက်ပေါ်မှ လူမှု ကွန်ရက်များဆိုသည်မှာ သတိမပြတ်စေဘဲ အသုံးချတတ်လျှင် အန္တရာယ်ကိုရှောင်ကွင်းနိုင်ပြီး မိမိအတွက် အကျိုးများနိုင်မည့် ဗဟု သုတရင်းမြစ်များပင် ဖြစ်လာနိုင်ပါ သည်။
၃။ မိမိအကောင့် Password
Facebook အကောင့်၊ Twitter အကောင့်၊ သို့မဟုတ်ပါကလည်း အခြားမိမိအသုံးပြုနေကျ (အသုံးပြုနေ ကျမဟုတ်ပါက လည်း ရံဖန်ရံခါ အသုံးပြုတတ်သော)အွန်လိုင်းလူမှုကွန် ရက်အကောင့် Account တစ်ခုခု၏ စကားဝှက် Password သို့မဟုတ် အီးမေးလ် Password ကို လူမှုကွန် ရက်ပေါ်တွင် အသိပေးလိုက်မိခြင်း သည် လွန်စွာအန္တရာယ် များသောလုပ် ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ Facebook က ဖော်ပြပေးထားသော လူမှုကွန်ရက် များကို အန္တရာယ်ကင်းစွာနှင့် အကျိုး ရှိရှိအသုံးချနိုင်စေ ရန် လိုက်နာသင့် သောအချက်များထဲတွင် မိမိ၏ပတ်စ ဝေါ့အား အသိပေးထားမိခြင်းသည် နံပါတ် ၁ သတိပြုစရာ လုံခြုံရေး ကိစ္စ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ မိမိ၏ အကောင့်တစ်ခုခုအား မိမိမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကိုလည်းဝင်ရောက် Log on ပြုလုပ်ပြီး စစ်ဆေးအသုံးပြုစေ လိုသောကြောင့် ပတ်စဝေါ့ပေးလိုက် ခြင်းမျိုးသည်လည်း အန္တရာယ်ရှိလာ နိုင်သော လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာအပြုအမူ တစ်မျိုးပင်ဖြစ် ပါသည်။ အမှန်တကယ်ပင် စစ်မှန်စွာ ချစ်ခင်ကြင်နာပြီး ရိုးသားသူအဖော်မွန် တစ်နည်းအားဖြင့် ယုံကြည်ထိုက်သောချစ်သူဆိုပါက ပြဿနာမဟုတ်သော်လည်း အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်မူ သတိမူထား သင့်သောကိစ္စဖြစ်သည်။
မိမိကြိုမမြင်နိုင်သော အနာဂတ်တွင် လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကဲ့သို့ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ရေရှည်အတွက် စိတ်မချရ သည့် ဆက်ဆံရေးများအတွက် မိမိအသုံးပြုသည့် အကောင့် ပတ်စဝေါ့များကို မည်သူကိုမျှ ပေးမသိခြင်းသည်သာ အကောင်း ဆုံးဖြစ် ပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်၍ ရှောင်လွဲမရ သောအခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ပေးမှ ဖြစ်မည့် အနေအထားမျိုး တွင်လည်း မကြာခင်အချိန်အတွင်း ပတ်စဝေါ့ကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲ၍ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Password ကို မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း သိထားခြင်းသည်သာ အန္တရာယ် အကင်းဆုံးအပြုအမူ ဖြစ်ပါသည်။
လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက် အများစုတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပေးရသည့် Personal Information ကဏ္ဍတွင် မိမိ၏ပတ်စဝေါ့ကို မေ့သွားပါက ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှ သတိပေးနိုင်ရန် အတွက်ဟု အကြောင်းပြ ကာတောင်းသည့် ပတ်စဝေါ့သဲလွန်စ Password hints များသည်လည်း အထူးသတိ ပြုပေးရမည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များက ပတ်စဝေါ့ သဲလွန်စအတွက် ပတ်စဝေါ့စကားလုံးများထဲမှ တစ်လုံးကို ပေးထားခိုင်း ပါသည်။ ”ကိုယ့်အိမ်က ကြောင် ကလေးရဲ့နာမည်ကဘာလဲ” ”ကိုယ့် ရဲ့ပထမဆုံးဆရာရဲ့အမည်က ဘယ်သူလဲ” ”မိခင်ရဲ့အပျိုနာ မည်က ဘာလဲ” စသည်ဖြင့် ရေးခိုင်းတတ် သော စကားဝှက်သဲလွန်စများကို သတိပြု၊ ဂရုစိုက်ကာပေးသင့်ပါသည်။ မိမိ စကားဝှက်ကို မိမိ မဟုတ် သော အခြားသူတစ်ဦးဦး မှန်းဆမိသွားနိုင်မည့်၊ သိသွားစေနိုင်မည့် စကားလုံးများကိုပေးမိခြင်း မှ ရှောင် ကြဉ်သင့်ပါသည်။
၁။ မိမိအသိမပေးလိုသော အခြား အချက်အလက်များ(အားလုံး)
အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်များ ပေါ်ရှိ မိမိကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးအစီအမံ Security Setting များသည် မိမိ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးပြုပြင်ထားနိုင်သော အစီအမံများဖြစ်သဖြင့် မိမိအတွက် အလုံခြုံဆုံးနှင့် အကျိုးအရှိ ဆုံးဖြစ်စေ နိုင်မည့် လုံခြုံရေး အစီအမံများကိုသာ အချိန်ယူရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ ဤ ကဲ့သို့ Security Setting များကို မိမိက ကောင်းစွာရွေးချယ် ခဲ့စေကာမူ တစ်ခါ တစ်ရံတွင် မိမိမမြင်စေလိုသောသူများက မိမိတင်လိုက်သော Post များကို မြင်တွေ့နေနိုင်ပါသေးသည်။ ဤကဲ့ သို့သောဖြစ်ရပ်များသည် ယနေ့လူသုံး အများဆုံး လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်သော Facebook တွင်အမြင်တွေ့နိုင်ဆုံး ဖြစ်ပါ သည်။
ဥပမာ- မိမိက Face-book ၏အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော Applications များ၊ ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိ Quizzes များ၊ စစ်တမ်း Poll များကို အမှတ်တမဲ့အသုံးပြုလိုက်မိပါကလည်း မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးအစီအမံများ ကို ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြမိသလို ဖြစ် တတ်ပါသည်။ Facebook တွင် အခမဲ့ လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သော Applications ပေါင်း ၁၅ဝ ကျော်ရှိသဖြင့် အသုံးပြု သူများ သတိထားဖွယ် အချက်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်လူမှုကွန်ရက်တွင် Account ပြုလုပ်အသုံးပြုပါစေ၊ မိမိ တင်လိုက်သော Status တစ်နည်း အားဖြင့် ဝေမျှ လိုက်သောသတင်း အချက် အလက်များမှတစ်ဆင့် အန္တရာယ် တစ်စုံ တစ်ရာ ဖြစ်လာနိုင်မည့် ဖြစ်ရပ်မှ တတ်နိုင် သမျှကင်းစေရန် အမြဲတစေ သတိမူဂရုပြုသင့်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အင်တာနက် ပေါ်မှ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် When you doubt, Leave it out!” (သံသယရှိပါက မည်သည်ကိုမျှ မသုံးပါနှင့်) ဟူသော ဆောင်ပုဒ် ကို အမြဲလက်ကိုင်သုံးခြင်းသည်သာ မိမိအတွက် အသင့်တော်ဆုံးနှင့် အလုံ ခြုံဆုံး အကာအကွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
Ref : Facebook Safety (www.facebook. com),
http://www.telegraph.co. uk, http://www.nytimes.com.
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မမျှဝင်သင့်သော ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ(၁) Share this:TwitterFacebookGoogleEmailPrintRedditLinkedInLike this:Like Loading...